Congo - Lacagaha deeqaha waxbarasho: Dawladdu waxay la kulmeysaa ardayda ku jirta Cuba - TELES RELAY
ACCUEIL » WAXBARASHADA »Congo - Lacagaha deeqda waxbarasho: Dawladdu waxay la kulmeysaa ardayda ku jirta Cuba
Congo - Lacagaha deeqda waxbarasho: Dawladdu waxay la kulmeysaa ardayda Cuba
Wafdi dowladda Congo la filayay isbuucaan ee Cuba, halkaas oo ay u tageen inay ardayda la kulmi ka Republic of Congo, isagoo sheegtay in lacagaha kugu bilood deeq waxbarasho. Ka kooban wasiirada arrimaha dibadda, Tacliinta Sare iyo saraakiisha sare, wafdiga ayaa rajeynaya in la helo dhul caadi ah ardayda uu.
Waxaa jira dhowr maalmood, xaaladda ayaa u gudbay in ay campus Havana halkaas oo ardayda ayaa qaylo dalbaday boorsooyinka ay. Toddobo iyo toddoba bilood oo sax ah, waxay qiyaasayaan. Codsiyada ayaa si aad ah loogu cambaaraynayay bilayska Cuban, iyaga oo sameeyay afar dhaawac ah sababtoo ah waxaa loo tixgeliyey rabshad.
In Brazzaville, mas'uuliyiintu ma diidaan dhibaatada, si ka duwan soo horjeeda. Si kastaba ha ahaatee, maamulka farta xaaladda dhaqaale ee hadda taas oo bilaabay khasnadda dawladda iyo dadaallada rahaamad si wax looga qabto dhibaatada. Iyada oo wadahadallada socda ee la socdo Sanduuqa Caalamiga ah ee LacagtaFMI), xukuumaddu waxay si dhab ah u rajeyneysaa in ay la kulmaan dhamaan culeysyada.
Sawirka sawirka: Hore ee Jamhuuriyada Congo